Mai Ro: Hihira Ny Hiran’i Yadiko · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2015 18:21 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Français, Deutsch, Ελληνικά, Español
Aurelio Kuiru tamin'ny taona 1980. Sary avy amin'i Jorge Gasché.
Rotɨmɨe (mpihira sady mpamoron-kira): Aurelio Kuiru 1989
Fandikana, famoronan-kira, sy dikanteny ho amin'ny teny Espaniola: Ever Kuiru
Mpandray anjara: Laura Areiza y Selnich Vivas
Noraketin'ilay mpampianatra sady mpikaroka Fernando Urbina Rangel tamin'ny taona 1989, izay miara-miasa amin'ny kolontsaina indizeny ao Kolombia nandritra ny dimampolo taona mahery ireo hira ireo. Tamin'izany fotoana izany, vonona nanangana anáneko (trano lehibe) vaovao ny raiko, tompony sy mpandova ny vondrona.
Roapolo taona taorian'ny nahafatesan'ny raiko, mbola afaka mihaino ny feony sy ny feon'ny olona niaraka taminy tamin'izany fotoana izany izahay. Noho ireo mpikaroka maro sy ny fahalalan-tanan'izy ireo, nahavita nanangona raki-peo marobe an'ireo olona izay efa tsy miaraka aminay intsony ny fokonay. Ity tetikasa ity no ahafahanay manentana ny fiarahamonina hihaino ny feo sy ny fahalalan'ireo ray aman-dreninay sy ray aman-drenibenay.
Ireo no hira “nauifeirua jibarua”, izay midika ara-bakiteny hoe hira tsotra mialoha masoandro mody. Azo hiraina araka ny safidin'ny tarika mpihira izany. Amin'ny fotoana vao hanombohan'ny dihy, mbola mifoha ny olona ao anaty ala. Mbola eo amin'ny tontolo iainana ny hery ratsy. Eto izahay hanolotra hira roa (hira miadana momba an'i yadiko) sy yɨkuiyarua (haingana sy mampitsambikina), satria tokony ho hita mandritra ny lanonana izy ireo.
Tahaka ity iray ity
Mazavaratsy ny andro ao aminay
Avy eny ny fanombohana avy any ambony
Avy amin'ny rivotra no niavian'ny biby
Ao aminay, miposaka ny andro
Avy ao ny fanombohana avy any ambony
Avy eny ny fanombohana
Avy amin'ny kotrokorana no nahatongavan'ny biby
Avy amin'ny rivotra no nahatongavan'ny biby